Shiinaha Juda kiln -300T / D line-soo-saarka -EPC warshad mashruuc iyo soosaarayaasha | Yahuuda
Nidaamka farsamada ：
Nidaamka feer: dhagaxa iyo dhuxusha waxaa loo kala qaadaa siday u kala horreeyaan dhagaxa iyo baaldiyo dhuxusha oo leh suumano; dhagaxa miisaamaya ayaa markaa lagu dhex gelinayaa suunka isku dhafka ah iyada oo loo sii marayo sheyga.
Nidaamka quudinta: dhagaxa iyo dhuxusha lagu keydiyo suunka isku dhafan ayaa loo qaadaa buurta, taas oo ay maamusho dabayshu si ay hawadu u wareegto kor iyo hoosba si ay u quudiso, taas oo hagaajinaysa mugga gaadiidka isla markaana gaadha waxtarka sare iyo keydinta tamarta.
Nidaamka qaybinta: isku darka dhagaxa iyo dhuxusha waxaa lagu quudiyaa keydka bakhaarka iyada oo loo marayo sheyga oo lagu shubo sheyga wareega. Isku darka ayaa si isku mid ah loogu quudiyaa qaybta sare ee foornada iyada oo loo marayo sheyga muruqyada badan ee wareega.
Nidaamka Bixinta Lime: ka dib marka la qaboojiyo dhagaxa nuuradda calcined, liinta la dhammeeyay ayaa loo sii daayaa suunka soo saarista lime ee mashiinka soo dejinta afar-geesoodka ah iyo laba qaybood oo waalka hawada lagu xidho. Haddii ay dhacdo toogashadu, jihada iyo xaddiga ka soo baxa liinta waa la waafajin karaa si loo gaaro daminta dabka iyo xudunta-jiida.
Nidaamka ka saarida Boorka: kadib marawaxadda jilicsan ee jilicsan, boodhka ay kujiraan qiiqa iyo gaaska marka hore iyada oo loo marayo aruuriyaha boodhka duufaanka si looga saaro qaybo badan oo boodh ah; Kadibna shaandhada bacaha si looga saaro qaybaha yaryar ee boodhka; Kadib markaad gasho filimka biyaha, gaaska qiiqa ayaa xoqin doona filimka biyaha markasta, iyo qiiqa boorka ah waa la qoynayaa. Waxay gali doontaa gunta sagxadda boodhka ee socodka biyaha waxaana lagu sii deyn doonaa haanta qashinka. Roob ka dib, biyaha nadiifta ah dib ayaa loo isticmaali doonaa.
Nidaamka xakamaynta korantada: qaadashada nidaamka xakamaynta kumbuyuutarka Jarmalka ee Siemens, khad si toos ah wax soo saar toos ah u leh, kharash-badbaadin, tayada wax soo saarka oo deggan.
Hore: Golaha Khadadka Wax Soo Saarka Lime
Xiga: Juda Kiln-Inner Mongolia 300T / D × 3 khadadka wax soo saarka liinta ee bey'ada u fiican
Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line,